Draxler oo u xiiso qabo inuu ka horyimaad Real Madrid | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Draxler oo u xiiso qabo inuu ka horyimaad Real Madrid
Posted by: radio himilo April 5, 2016
Julian Draxler oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta Wolfsburg ayaa sugi la’ kulanka berito uu ka hor imaan doono kooxda Real Madrid oo ay ku balansanyihiin lugta koowaad ee wareega siddeed dhammaadka tartanka kooxaha Yurub.
Wolfsburg ayaase safaadeysa kahor kulanka Champions League iyadoo aan guul arag saddexdii kulan oo u danbeysay oo Bundesliga ay dheesho, labo kamid ah guuldarro ayaa soo gaartay.
Dhibta Bundesliga ka heysata ayaana kooxda reer Jarmal gayeysiisay inay ku jirto kaallinta siddeedaad ee kala horeynta horyaalkaa, waxayna toddobo dhibcood u jirtaa booska loogu soo baxo Champions League.
Iyadoo kooxdu ay dhibtooneyso misna weeraryahankeeda Draxler ayaa yiri: “Goortii aan arkay inaan ku beeganahay Real Madrid aad baan u farxay sababtoo ah sanadkii hore dhaawac ayaa ii diiday inaan u dheelo Schalke oo la dheeshay Real Madrid, halka kii ka horeeyay ay nasoo gaartay guuldarro qiyaastii ah 9-2.”
Draxler ayaa yiri ugu danbeyntii “Xagaagan Real Madrid waa inaan tusnaa inaan nahay koox xoogan, anna aan ahay xiddig sare. Wolfsburg waa inay si wacan u daafacataa si lamid ahna u weerartaa Real.”
Julian Draxler ayaa rajeynaya in Raul Gonzales oo koox wadaag ay ahaayeen isla markaana wax ka badan 700 oo kulan u saftay Real Madrid inuu kulanka u soo daawasho tegi doono.
Previous: Hooyo filaneysay inay hal cunug dhasho oo shan carruur ah mar wada dhashay
Next: Silva oo doonaya in Ibrahimovic uu sii joogo PSG